Online Store Site များတွင် ဘယ်ဆိုဒ်က အကောင်းဆုံးဖြစ်&#4126 - MYSTERY ZILLION
Online Store Site များတွင် ဘယ်ဆိုဒ်က အကောင်းဆုံးဖြစ်&#4126
January 2008 edited July 2010 in Internet & Email
Online တွင် file များကို Share လုပ်ချင်သည် Store လုပ်ချင်သည်။ဘယ် Online Store and Share Site က (သိုလှောင်မှုပမာဏ နှင့် upload and download အမြန်ဆုံး)အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသနည်း။လုပ်ပုံလုပ်နည်းများကို ပါသိချင်ပါသည်။
ကျနော် MZ Member များအတွက် file share လုပ်ချင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာချစ်သူများအတွက် ဝမ်းသာစရာထင်ပါသည်။
၄င်း ဖိုင်သည် အချို ့သောသူများလက်ဝယ်တွင် ရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ အချို ့သောသူများတွင် ရှိမည်ဟုမထင်ပါ။ ကွန်ပြူတာချစ်သူများအတွက် ၄င်းဖိုင်သည်အသုံးဝင်ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကြိုတင် ကြေငြာအပ်ပါသည်။
၄င်း file CD ကို ကွန်ပျူတာဂျာနယ် မှ ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းဖိုင်တွင် ကွန်ပျူတာဂျာနယ်မှ ၂၀၀၄မှ၂၀၀၇ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်ပေါင်း ၄၈ အုပ် နှင့် သိပ်ပံနှင့် နည်းပညာဂျာနယ်မှ စာအုပ်ပေါင်း No.1 မှ No.50 ပါ၀င်ပါသည်။
Information for all...........
အဲဒီအတွက်ကတော့ Space များများရတဲ့ ဆိုက်ကကောင်းပါသည်... Divshare ကတော့ မဆိုးဘူးထင်တယ်ဗျ...
ကျေးဇူးပါ PhpCrazy ..space များများနဲ့တင်မြန် ချမြန် တဲ့ site မျိုးပေါ့ကွယ်.....
များများသိတော့ ကြိုက်တာရွေးလို ့ရတာပေါ့...........
www.drivehq.com ( 2GB Free ) You can share your file to your friends. You can used also email.
www.adrive.com ( 50 GB Free )
If you want to use in this site , you must do reigister firstly..!
You first test and tell me the result. because I can't test because of slow connection.
Online storage sites are
As for me, free user, as for download speed, Media fire is the best. I can download up to 200 kbps but with Rapidshare up to 40 to 50 kbps. For Zshare up to 30 kbps and Zshare can't allow download accelerator.
ဖိုင်များသီချင်းများ တင်နိုင်သည့် sites များ
ပုံများတင်နိူင်သည့် sites များ
As for me, the best online file storage is Mediafire.
ISTEIN for ever
တော်တော်လေးသဘောတွေ့ပါတယ်.. သီချင်းတွေ ရှယ်ရာလုပ်တဲ့လူတွေ သုံးတာတွေ့လို့လိုက်သုံးဖြစ်သွားတာပါ...
သူက တစ်ခါပဲ တင်ရပါတယ်... ပြီးရင် အော်တိုငုတ်တုတ် တခြားဆိုဒ်တွေကိုပါ distribute လုပ်သွားပေးပါတယ်...
အဲ့တော့ ဒီဆိုဒ်က ဘန်းထားလို့.. ဟိုဘက်လေးပြောင်းတင်ပေးပါတို့.. ဒီဆိုဒ်ပျက်သွားလို့ နောက်တစ်ဆိုဒ်ပေါ်တင်ပေးပါတို့ ပြဿနာလေးတွေ လျော့သွားတာပေါ့ဗျာ...
ဆိုဒ် limit ပေးတာတော့ နည်းပါတယ်.. ၁၅၀ မက်ပဲပေးပါတယ်... သီချင်းရှယ်ဖို့တော့ အဆင်ပြေပါတယ်...
တစ်ခါတင်ပြီးသွားတာနဲ့... အောက်ပါဆိုဒ်တွေကို အော်တိုဖြန့်ပေးပါတယ်..
ရှယ်ရင်တော့ sharebee က လင့်ကိုပဲပေးလိုက်ရုံပါပဲ... :67:
oh, there are so many useful online storage file.
[B] www.humyo.com [/B]
mediafire ဟာတော်တော်ကောင်းပါတယ် ကျတော် ၂၀၀၅ ထဲက သုံးနေတာပါ အခု ထိ အဲဒီထဲက လင့်တွေမပျက်ပါဘူး ကျတော် တင်ထားတဲ့ ဟာတွေလဲ တော်တော်တောင်များနေလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်မနဲပြန်ရှာရတယ်